Fikambanana Iza: manampy amin’ny fialana amin’ny zavamahadomelina | NewsMada
Fikambanana Iza: manampy amin’ny fialana amin’ny zavamahadomelina
Ny tanora no hoavin’ny firenena! Hananana taranaka vanona, nijoro ny fikambanana Iza, manentana ny tanora tsy hiroboka amin’ny fidorohana zavamahadomelina. Manampy ireo efa tafiditra amin’izany koa izy mba hiala, hahatontosa ny fianarana sy hananana hoavy tsara kokoa, any aoriana.
Anisan’ny sakana tsy hampandroso ny firenena ny firobohan’ny tanora eo amin’ny fidorohana zavamahadomelina (sigara, toaka, rongony). Resy lahatra amin’io fomba fijery io ny Dr Velonjara Voary, ka nanangana ny fikambanana Ilay zanaka adala na Iza, ny taona 2015. “Matetika, te hiala amin’ny ray aman-dreniny ny tanora, izay mihevitra fa ilaina ny fahalalahana. Ao anatin’izany ny fahazoany mifoka na misotro zavamahadomelina, izay marika fahalalahana izay sy toa tsy misy lafy ratsiny aminy. Rehefa tafalatsaka lalina sy miankin-doha amin’izany anefa izy ireo, matetika, mitsahatra amin’ny fianarana ary potika hatramin’ny hoaviny”, hoy ny fanazavan’ny Dr Velonjara Voary.
Io antony io indrindra no nahatonga ny fikambanana Iza hanompana ny asany amin’ny fisorohana ny fidorohana zavamahadomelina sy ny fanampiana ireo tanora resy lahatra ka te hiala amin’izany. Ao anatin’izay fisorohana izay, midina any amin’ny lycées ny fikambanana, mampahafantatra ny voka-dratsin’ny zavamahadomelina sy manentana ny tanora mpianatra tsy hiditra amin’izany. Hahatafita kokoa ny hafatra, misy tanora mivondrona anaty kaompania samihafa, manao hetsika ara-javakanto hoenti-manentana.
Ankilany, mandray an-tanana ireo te hiala amin’ny zavamahadomelina ny Iza ary manara-maso azy ireo mba tsy hiverina amin’izany fahazaran-dratsy izany intsony. “Misy ny olona tonga mivantana aty amin’ny fikambanana. Mandritra ny fidinana eny amin’ny Lycées koa, ao ireo efa tafaroboka ary resy lahatra fa hiala ka manantona anay”, hoy ny Dr Velonjara Voary. Maimaimpoana avokoa ny fanatanterahana ireo asa ireo.
Tsy sahy miresaka ny fidorohany rongony ny mpianatra
Miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny fikambanana Iza ka afaka midina any amin’ny Lycées, nanomboka ny taona 2017. Tamin’io taona io, lycées telo eto Antananarivo (Nanisana, Ambohidratrimo, Lycée moderne Ampefiloha) no nanaovan’ny fikambanana fanentanana sy fandraisana an-tanana ireo efa mpidoroka zavamahadomelina. “Fantatra tamin’io fa 55%-n’ireo mpianatra amin’ny kilasy “Seconde” no efa nanandrana zavamahadomelina ka 5%-n’ireo no efa niankin-doha tamin’izany. 180 ny tontalin’ny mpianatra noraisina an-tanana tao amin’ireo Lycées ireo. Tsy voatery hoe efa miankin-doha akory izy ireo. Nanambara ny 77%-n’ireo fa tonga saina ary 23 tamin’ireo efa nidoroka tanteraka no tafala”, hoy ny tatitry ny Dr Velonjara Voary.
Araka ny fanazavan’ity mpitarika ny fikambanana Iza ity, ny fiankinan-doha amin’ny sigara no tena resahin’ny ankizy na fantatra aza ny fandraisan’ny sasany amin’izy ireo rongony. “Matahotra ny ho voaroaka mantsy izy ireo ary izay no nangatahana fiaraha-miasa amin’ny minisitera, mba tsy hisy ny fandroahana fa ny fanavotana ireo efa midoroka”, hoy izy. Marihina fa haingana kokoa ny fiankinan-doha amin’ny sigara sy ny rongony noho ny toaka.